मुख्य समाचार Archives - A complete Nepali news portal based on news & views
११ जेष्ठ २०७९, बुधबार ११:३१ May 25, 2022 Buddha Sharan
देशको ६ महानगरपालिका मध्ये थप चार महानगरपालिकाका अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको छ । परिणामअनुसार भरतपुर, वीरगन्ज र ललितपुर र पोखरा महानगरपालिको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको हो भने यसअघि नै विराटनगरको नतिजा आइसकेको छ भने काठमाडौं महानगरमा मतगणना जारी छ । सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको भरतपुर महानगरमा प्रमुख र उपप्रमुखमा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । महानगर प्रमुखमा गठबन्धनबाट […]
८ जेष्ठ २०७९, आईतवार ०७:३० May 22, 2022 Nonstop Khabar
हेटाैंडा । हेटाैंडा-काठमाडौं सडक खण्डमा भएकाे गाडी दुर्घटना हुँदा ४ जनाको मृत्यु भएको छ । हेटाैंडाबाट काठमाडौं जाँदै गरेकाे ना ४ च २३१५ नम्बरको मिनि ट्रक मकवानपुरको इन्द्रसराेवर गाउँपालिका -२ सिमखाेलामा दुर्घटना हुँदा घाइते भएका ४ जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । इलाका प्रहरी कार्यालय भीमफेदीका प्रहरी निरीक्षक प्रतिमा कार्कीका अनुसार ओभर स्पिडका कारण […]
६ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार २१:४६ May 20, 2022 Nonstop Khabar
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको पाथीभरामा एक तीर्थयात्रीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाका ६४ वर्षीय हरिप्रसाद घिमिरे रहेको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ । फेदीमा अस्वस्थ महसुस गर्नुभएर बेहोस हुनुभएका घिमिरेलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल ल्याउन साथ चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । परिवारसँगै दर्शनका लागि आएका घिमिरेलाई उनकै गृहजिल्ला पठाइसकिएको पाथीभरा […]
६ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार २१:४२ May 20, 2022 Nonstop Khabar
काठमाडौँ । सरकारले सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) नारायणदत्त पौडेललाई शुक्रबार सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) मा पदोन्नति गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले उनलाई एआइजीमा बढुवा गरेको हो । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हलचोकमा आयोजित एक समारोहकाबिच उनलाई आजै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरे। समारोहमा महानिरीक्षक अर्यालले आफ्नो […]
६ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार २१:३८ May 20, 2022 Nonstop Khabar
काठमाडौँ । ब्युटी प्याजेन्ट बलात्कार घटना प्रकरणकी पीडित युवतीको घरमा प्रहरी पुगेको छ । २०७१ सालमा नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक गर्ने युवतीको घरमा प्रहरी पुगेको हो । प्रहरीले उनीसँग सामान्य सोधपुछ गर्नुका साथै काउन्सिलिङ समेत गरेको छ । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट प्रहरी टोली उनको घरमा पुगेको हो । कार्यालयका प्रमुख एसएसपी […]
अहिलेसम्म ५२९ पालिकाको मतपरिणाम सार्वजनिक, कुन दलको कति ?
५ जेष्ठ २०७९, बिहीबार ०९:२४ May 19, 2022 Nonstop Khabar
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक हुनेक्रम जारी छ। अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले अग्रता कायम राखेको छ। ५२९ स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक हुँदा कांग्रेस पहिलो स्थानमा छ। नेपाली कांग्रेस २३६ पालिकामा विजयी भएको छ। परिणाम घोषणा भएकामध्ये कांग्रेसले ४४ प्रतिशत स्थानीय तहमो जित दर्ता गरेको हो। कांग्रेसले अहिलेसम्म २३९ प्रमुख पदमा विजयी हुँदा २२० पालिका […]
४ जेष्ठ २०७९, बुधबार २३:१५ May 18, 2022 Nonstop Khabar
काठमाडौं । खेलाडी प्रशिक्षकबीचको विवादपछि गठन भएको तीन सदस्यीय समितिले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । सातदोबाटोस्थित एन्फा मुख्यालयमा भिक्टोर राणाको संयोजकत्वमा रहेको समितिले एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरलाई २८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको हो । यस अघि मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीको व्यवहारका कारण १० खेलाडीले बन्द प्रशिक्षण छाडेका थिए । यसपछि […]
अस्मिता अधिकारीलाई छिन्नलता पुरस्कार
४ जेष्ठ २०७९, बुधबार २३:१३ May 18, 2022 Nonstop Khabar
काठमाडौँ । गायिका अस्मिता अधिकारीलाई ‘छिन्नलता प्रतिभा पुरस्कार २०७९’ प्रदान गरिने भएको छ । छिन्नलता गीत पुरस्कार गुठीले यसवर्षको सम्मान अधिकारीलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । आफूले पुरस्कार पाउने घोषणा भएपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिदैँ गायिकाले खुशीको सिमा नरहेको बताएकी छिन् । छिन्नलता पुरस्कार !ओहो! छिन्नलता लेख्दै गायिका अधिकारीले सम्मानित हुन लागेको थाहा पाउँदा […]
३ जेष्ठ २०७९, मंगलवार १५:४९ May 17, 2022 Nonstop Khabar
काठमाडौं । चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको छ । मंगलबार सुनुवाइसँगै समितिले श्रेष्ठ र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत दानबहादुर तामाङको नाम अनुमोदन गरेको हो । दुवै विरुद्ध समितिमा उजुरी परेको थिएन बाँकी प्रस्तावित १८ राजदूतविरुद्ध परेको उजुरी खोल्न र सुनुवाइ गर्न भोलि बुधबार बैठक बोलाइएको छ ।
नेपाली कांग्रेस १० ९ ठाउँमा प्रमुख र उपप्रमुखमा विजयी हुँदै अहिले सम्म पहिलो स्थानमा , एमालेले ६४ पालिकामा विजयी
३ जेष्ठ २०७९, मंगलवार ०८:५३ May 17, 2022 Buddha Sharan
जेष्ठ ३, काठमाण्डौ । स्थानीय तहको निर्वाचनको पछिल्लो परिणाम अनुसार अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेस १०९ ठाउँको प्रमुख र उपप्रमुखमा विजयी हुँदै पहिलो स्दथानमा पकड बनाएको छ । देशभरका २३० पालिकाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुँदा कांग्रेस पहिलो दलको सुरुवाती निरन्तरता बनाएको हो । दोश्रो स्थानमा रहेको एमालेले ६४ पालिकामा जित हात पारेको छ । नेकपा ९माओवादी केन्द्रले […]